> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Laptop
Ayaan Laptop soo kaban karto, tirtiray Pictures?
Hi, hal sawir aad u muhiim ah waxaan tirtiray ka laptop Dell. Recycle Bin ka aan u saaro si aan dib u ka Recycle Bin ma ka heli kartaa ma. Sawir Tani waa sawir aan qalin. Si kastaba waxaan weli u hanato karaa sawirka? Mahad badan.
Suurtagalnimada galabsaday sawirada tirtiray ka laptop ku xiran tahay wixii ku dhacay ka dib markii sawirrada ayaa lagu tirtiray. Marka sawir la tirtiray, waxaa lagu calaamadeeyay lahaa xogta iyo Reebnaan yaa ku wadid aad laptop ee adag. Banaanka u degan ayaa diyaar u ah wixii macluumaad cusub oo ku saabsan wadid aad u adag. Taas macnaheedu waa in ay tahay mid aad u muhiim ah in la joojiyo badbaadiyo wixii macluumaad cusub ku wadid aad laptop ee adag ka dib markii ay sawiro ka lumeen. Markaas waxaad ka raadin kartaa barnaamijka sawir laptop ah si ay kuu caawiyaan.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac aad bixisaa habka ugu fudud ee ay u soo kabtaan sawirada tirtiray ka laptop. Ma la socon karaa muddo ku dhow oo dhan magac Windows laptop oo lagu daydo Mac, oo ay ku jiraan Dell, Sony, Toshiba, Lenovo ThinkPad, Macbook, Macbook Pro, iwm Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad ay leeyihiin isku day ah. Version maxkamad Tani iskaan doonaa laptop for files tirtiray oo kuu sheegi waxa sawirrada la soo kabsaday si sax ah karaan.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Laptop? Kaliya 3 Talaabooyinka
Hagaha soo socda waa u user leh laptop Windows ah. Haddii aad tahay qofka qor Mac ah, waxaad samayn kartaa dib u soo kabashada ee talaabooyin la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Select hab kabashada
Sida aad ka arki kartaa image hoos ku qoran, waxa aad helaysaa 3 kabashada hababka uu ka soo xusho ka dib markii ay barnaamijka.
Si aad u soo kabsado sawirada tirtiray ka laptop, aynu dooro "lumay Recovery File" wada.
Tallaabada ah Barzakh, 2 Abuurey si ay u eegaan sawirada tirtiray
Waxaad u baahan doontaa in ay doortaan Risaalo in sawirada lagaa tirtiro ka oo guji "Start" si ay u bilaabaan raadinaya photos lumay.
Fiiro gaar ah: Haddii sawirro ku leedahay laptop lumay, maxaa yeelay formatting, waxaad u baahan tahay "Enable Deep Scan" function uu furmo.
Tallaabada 3 ceshano sawirada tirtiray ka laptop
Ka dib markii iskaanka, faylasha helo waa la soo bandhigi doonaa "Jidka" iyo "nooca file" furmo. Waxaad ku eegaan kartaa sawirrada si aad u hubiso sida badan oo sawiro tirtiray la soo kabsaday karo. Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan sawirada aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga ku soo celi si aad laptop badbaadiyo.